United Kingdom | Otu Di na Nwunye
September 8, 2019 + Europe, Ebe nkiri ebe nkiri, History, News, United Kingdom
Kemgbe afọ 1800, akụkọ akụkọ banyere Jack na Ripper Murders na London East East amawo mmasị ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme na ndị na-anụ ihe omimi gburugburu ụwa. Ugbu a, a na-enyochagharị akwụkwọ edemede na-ezighị ezi banyere ihe omume dịka akwụkwọ edemede nke "Jack the Ripper" na-enyocha - ọ ga-emesị mata? Ọ bụ akụkọ gbara ọchịchịrị nke igbu ọchụ na mayhem mere shrouded ... GỤKWUO
June 23, 2019 + Belgium, Ụbọchị Njem, England, Europe, History, Uncategorized, United Kingdom, Wales
Mee 30, 2019 + Arts & Music, England, Europe, Transportation, Nhazi njem, United Kingdom
Otu esi emefu ugbua ogologo oge na London
Enweghi ndepụta nke njem njem na-achọta zuru oke na-enweghị London, isi obodo nke England na United Kingdom. London dị n'ọtụtụ ụzọ, ọnụ ụzọ ámá dị n'etiti ọdịda anyanwụ ụwa na ụwa ndị ọzọ - gụnyere Europe, kamakwa ndị ọzọ nke ụwa. Ọ bụ n'ihi nke a ka London bụkarị ebe mbụ achọpụtara maka njem mba ụwa, karịsịa ... GỤKWUO
February 9, 2019 + Ụbọchị Njem, England, Scotland, Nhazi njem, United Kingdom
Nyochaa nke nkwụsịtụ nnukwu
Great Little Breaks, nke dị na www.greatlittlebreaks.com, bụ ebe nrụọrụ weebụ na-eme njem na UK bụ nke na-elekwasị anya na njem dị mkpirikpi na United Kingdom. Ọ na-elekwasị anya na inye ụlọ oriri na-enye ọnụ ahịa na ebe ndị ọzọ na-atụgharị anya na United Kingdom, ebe ebe ndị njem na-esite na ebe ndị ọzọ na United Kingdom enweghị ike ịkwado dị ka ebe ezumike ọzọ, ma ebe ndị bi na UK nwere ike. Ọ bụ ... GỤKWUO